Hospitaalli Ciroo tajaajila gahaa hin kennu jechuun jiraatonni komatan. - OMN
Hospitaalli Ciroo tajaajila gahaa hin kennu jechuun jiraatonni komatan.
(HOSPITAALA CIROO, Oromiyaa, Wax.17, 2017) – Godina Harargee lixaa magaalaa Cirootti kan argamu Hospitaalli Ciroo, Namoota dhukkubsatanii yaalamuudhaf gara hospitaala kanaatti dhufaniif, tajaajilli waldhaansaa dhukkubsattootaf kennamaatiin jiru xiqqaa waan ta’eef hawaasni magaalaa kanaatiif kanneen gandoota baadiyaa naannaawa Cirootti argaman irraa yaalamuuf gara hospitaalichatti dhufan rakkoo jabduuf saaxilamneetiin jirra jechuudhan komii qaban dubbatani.
Akka jiraataan magaalaa Ciroo kan rakkoo kana dhiyeenyatti quba qabu tokko OMN tti himetti, Hospitaalli kun ogeeyyii fayyaa gahaa akka hin qabnee fi kutaa kaardii irraa kaasee hanga mana qorichaatti hanqinna ogeeyyotaatiin, dhukkubsattoonni dabaree hiriiraa osoo eeggatani miidhamaatiin akka jiran himan.
Namni tokko tajaajila yaalaa argachuuf kaardii muratee hiriira galuudhaan sa’aatii 7 oliif taa’ee dabaree akka eeggatu ibsee namni kuni, kutaa Qormaata fayyaa ykn laabiratoriittis ogeessi fayyaa ramadameetiin jiru nama tokko qofa waan ta’eef dhukkubsattoota keessummeessuuf haala rakkisaa keessa jira hospitaalli kun jechuudhan maddi keenya kun magaalaa Ciroo irraa eereera.
Namni kun itti dabaluun Manni qorichaa hospitaala kanaa dawaa gahaa waan hin qabneef hawaasni naannawa kanaa baasii guddadhaaf saaxilamuun riferiidhaan gara finfinnee fi Adaamatti deemuuf dirqamuun, baasii humnaa oliitiif saaxilamatiin akka jiranis ibseera.
Gama mootummaatiin rakkoo kana furuu fi hanqinna ramaddii ogeeyyii fayyaa kana guutuuf wanti godhame jiraa? Jennee nama kana gaafanneetiin turre.
Akka jiraataan kun jedhutti yeroo hedduuf hawaasni naannichaa qaamota bulchiinsaa mootummaa kanneen dhimmi kun ilaallatutti iyyachaatiin turullee, wanti fooyya’e tokkollee hin jiru.
Hospitaala ciroo kanatti tajaajila yaalaa kan argatani jiraattota magaalaa ciroo qofa osoo hin taane, baadiyaalee Godina Harargee lixaa hedduu keessaallee dhufuun ummanni danuun tajaajila waldhaansaa asitti argachaatin akka turanii fi amma garuu namoonni baadiyaa fagoo irraa imalaniitiin dhufanis tajaajila yaalaa gahaa dhabuudhaan rakkoo tanaaf saaxilamaniiru jedha maddi keenya magaalaa Ciroo irraa.
OMN: Mil’uu Tibbanaa ( Waxabajjii 17, 2017)
OMN: ከቀድሞው የአንድነት ድርጅት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ከአቶ ሀብታሙ አያሌው ጋር የተደረገው ቃለምልልስ ክፍል 2 (June 17, 2017)
OMN: Oduu ( waxabajjii 17:2017)